काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानीको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको छ । सोमवार इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लामो समयदेखि यस्ता कम्पनी स्थापना गर्न नसकी लगानी ल्याउन नपाएका दाङ सिमेन्ट जस्ता उद्योग तथा परियोजनाहरूले अब कम्पनी स्थापना गरी लगानी ल्याउन पाउने भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि अहिले मात्रै कम्पनी स्थापनाका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो । योसँगै दाङ सिमेन्टले रू. १३ अर्बको एसएच इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पाउने भएको छ । यसरी स्थापना हुने कम्पनीमा विदेशी लगानीकर्ताको ८५ प्रतिशत र बाँकी १५ प्रतिशत लगानी भने नेपाली लगानीकर्ताको हुनेछ ।
यो नीति नहुँदा उद्योगले लगानी ल्याउन नसकेको तर राजपत्रमा नै सूचना आएपछि साझेदारको लगानी ल्याउन कम्पनी स्थापना गर्न विभागमा दर्ता गरिने उक्त उद्योगका लगानीकर्ताले जानकारी दिए । दाङ सिमेन्ट कुल रू. ३२ अर्ब ५० करोडको परियोजना रहेको भन्दै उनले उक्त कम्पनीको उक्त रकमबाहेक अन्य लगानी ऋण हुने जानकारी दिए ।
लगानीको सैद्धान्तिक सहमति पाएको १ वर्षपछि मात्रै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दर्ताको बाटो खुलेको हो । दाङ सिमेन्ट १६ वर्षअघि नै दर्ता भएको थियो । यो उद्योगमा अहिले कुनै काम पनि भएको छैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार यस्ता कम्पनी स्थापना गर्न राजपत्रको सूचनामा विभिन्न १६ ओटा शर्तहरू राखिएका छन् । उद्योगका रूपमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्दा लगानी गरिने उद्योगको क्षेत्र तोकेर मात्र उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लगानी गरिने क्षेत्र नेपालभित्र मात्रै हुनुपर्ने, विदेशी लगानी खुला गरिएका क्षेत्रका उद्योगमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने नितिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्ता कम्पनीले नेपालमा शेयर पूँजीको रूपमा मात्र लगानी गर्न पाउनेछन् । ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेञ्चरमार्फत भने लगानी गर्न पाउने छैनन् । यसैगरी यस्ता कम्पनिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कुनै कार्य गर्न नपाउने, न्यूनतम रू. १ अर्ब लगानी हुनुपर्ने, उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट लगानी स्वीकृत गराउनुपर्ने, धितोपत्र दलाल, बजार निर्माता, रियल इस्टेट कारोबार गर्न नपाउनेजस्ता शर्तहरू सरकारले राखेको छ ।